Warar - Noocyo kala duwan oo ah aluminium midabbo ah iyo habab aluminium lagu farsameeyo
Maaddaama ay tahay wax soo saar warshadeed, budada aluminium ayaa si ballaaran loogu adeegsadaa warshadaha casriga ah, iyo warshadaha sida qalabka diidmada, aluminiumyada dhoobada ah, iyo metallurgy kiimikada ayaa loo baahan yahay in lagu dabaqo. Farqiga u dhexeeya habka wax soo saarka dartiis, muuqaalka ka hooseeya mikroskoobka elektaroonigga ah ayaa inta badan u ekaanta dhibic-qaabeyaha iyo mid aan caadi ahayn. Sidaa darteed, midabbada aluminiumku waxay leeyihiin qaabab kala duwan oo jiritaan ah. Daahan budada aluminium iyo koollada qalinka aluminium waa tusaalooyin. Marka xigta, waxaan kuu soo bandhigi doonaa noocyada kala duwan ee aluminium midabyada, astaamaha kala duwan ee budada aluminium, dufanka budada aluminiumka iyo koollada qalinka aluminium, iyo hababka wax soo saarka ee habka wax soo saarka ee aluminium budada.
1. Waxaa ka mid ah dhammaan dalabyada budada ah ee aluminium alaabada ceyriinka ah, soosaarka rinjiga budada aluminium (ie aluminiumka midabka midabka leh) iyo koollada aluminiumka (ie, aluminiumka qalinka) waa mid ka mid ah meelaha ugu badan ee laga isticmaalo.
1. Boodhka aluminiumka ee la rinjiyeeyay waxaa loola jeedaa budada aluminium ee dhulka taal oo lagu daweeyay walxaha aluminium ee qaab jajab ah, dusha sarena waa la dahaadhay oo ku habboon yahay midabbo.
2. Budada aluminiumka ee rinjiga waxay leedahay muuqaal dhalaalaya, waxay leedahay astaamo gaashaaman oo muuqaal ahaan wanaagsan, dhalaalaya macdan qalin-cad, iyo saameynta indhaha ee xaglaha aan kala sooca lahayn. Budada aluminiumka midabka leh ee lagu duubay aashitada dufanka badan ayaa sidoo kale leh waxyaabo sabeyn filimka rinjiga. Tiknoolajiyada wax soo saarka budada aluminium ee daahan ayaa horumarsan, hawshu way fiicantahay, saameynteeduna way wanaagsan tahay
3. Aluminiumka qalinka aluminiumku waa isku dar ah dufanka aluminiumka aluminiumka iyo dareeraha. Astaamaha adeegsigiisa qiyaas ahaan waa isku mid sida dahaarka budada aluminium. Si kastaba ha noqotee, taariikhda nidaamka isticmaalka, isticmaalka aluminiumka qalinka aluminium ayaa aad u badan wax soo saarka iyo iibintuna way ka weyn yihiin.
Sidaa darteed, badeecada ceyriin ee budada ah ee aluminiumku waa sheyga ugu weyn ee wax soo saarka aluminium-ka, mana laha astaamaha gaashaanka jirka (awoodda qarsoon) iyo saameynta indhaha ee macdanta ee ay u baahan tahay aaladaha aluminium. Daahan budada aluminium iyo koollada qalinka aluminium waa laba nooc oo kala duwan oo ah aluminium midabbo. Daaweynta budada aluminium ayaa badanaa loo isticmaalaa in lagu soo saaro budada, iyo aluminiumka aluminium ayaa badanaa loo isticmaalaa in lagu soo saaro dareeraha ku saleysan dareeraha ama biyaha ku saleysan.
2. Hababka loo farsameeyo soo saarida budada aluminium:
1, habka atomization
Habka atomization budada Aluminium wuxuu u qaybsan yahay atomization hawo iyo atomization atom.
2, Habka qodista kubbadda
Habka qodista kubbadda Aluminium ee loo yaqaan 'Aluminium aluminium' wuxuu u qaybsan yahay qoynta kubbadda qoyan iyo qallajinta kubbada qalalan
3, habka jajabka
Aluminiumka birta ah waxaa lagu dhejiyaa mashiin jajab ah.
4, habka burburin
U isticmaal jajab burburin si aad u burburin
5. Shiidi iyo granulation
U adeegsiga Booqday Furimaha Dagaalka si aad u shiido una soo saarto walxaha aluminiumka birta ah.
Maaddaama ay tahay alaab ceyriin kiimiko ah oo aad u badan, budada aluminium ayaa si ballaaran loogu adeegsadaa midabbada, rashka, iyo warshadaha birta. Rajadiisu aad ayey u wanaagsan tahay. Haddii aad leedahay baahi budada aluminium ah, waa inaad doorataa soo saaraha joogtada ah si aad u iibsato oo si macquul ah oo sax ah u isticmaasho budada aluminium oo aad u feejignaato isticmaalkeeda.